Rap & inkolo — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Rap & inkolo
Kuba gama Ndikhumbula, hip hop enzengayo phithi noThixo kunye nonqulo. Andizimisele ukucebisa ukuba zonke Rappers abo bazinikele zonqulo. Kodwa Rappers bambalwa - okanye amagcisa loo mcimbi - gungqisa i umnqweno ukuquka uThixo kwindawo ethile kwimizobo yabo. Yinto eqhelekileyo yaye kulungile ukuba sithethe ngoThixo, kodwa umbuzo, Yintoni esithi? Abanye baya kuthi, "Yinto umculo nje. Musa kunjalo nzulu!” Kodwa yintoni rapper uthi phezu mic esinzulu ngakumbi kunawe ucinga.
Abanye baye basebenzisa hip hop ukuvakalisa inkolelo zabo zonqulo ngokunyanisekileyo okanye intsilelo. inkolo yamaSilamsi, The Percenters Ezintlanu, inkolo yamaKrestu, akanakwaziwa, ukungakholwa kuThixo, kunye nezinye iinkonzo zonke sele kukhuthazwe indlela yobugcisa. Ndicinga hip hop ngokukodwa busebenze ukuvakalisa ukunyaniseka nozinikelo nantoni siza bayayithanda. Ngokwenxalenye ngenxa krwada nezinyanzelisayo inkcubeko ngenxalenye kuba hip hop ivumela amagama, Ngaloo ndlela unako 'ukufundisa okunene.”
Kodwa ixesha elininzi hip hop na ofana yokucheba ngaphezu kwiklasi yesikole sangecawa. Rappers ngokungenankathalo wayebaleke ngomlomo, nokuba bayazi into uthetha ngazo okanye.
ukunyaniseka vs. angakhathali
Kukho ngabantu izicengcelezo zibonisa onyanisekileyo - khangela kunye nzima nenyaniso - nangona ngamanye amaxesha ndandifuna. Ndiyayihlonipha loo. Umntu ucinga Unobangela ' "Thixo 2.0,” okanye Kendrick Lamar ngayo "ufile lunxano”.” *Naxa ndingavumelani kokucingelwayo okanye izigqibo zabo, Ndiyakuthanda ukuphulaphula neyokudinga ngokunyanisekileyo. Kwaye kaninzi lwenza ukuba bathandazele emcees amanye.
Hip Hop ebesoloko waba icala imnyama nangona, apho amagcisa ukunyanga uThixo nonqulo ngokungenantlonelo kunye hloniphi. Rappers ngathi bathi nantoni amagama bazive kanye mzuzu - nokuba okunene bakholwa okanye hayi. Yaye kwi "iposi-lamaKristu” uhlanga lunjengolwethu, ezi baphathwa kakubi ngokuqhelekileyo zijoliswe uYesu kwibandla laKhe.
Kanjalo, kukho ezinye izinto - ezifana uhanahaniso nemali olambileyo "abashumayeli” - Olulungele ukuba zidlale. kodwa okubuhlungu kukuba, iBhayibhile, ibandla, uThixo ngokwakhe kaninzi baphathwa ezifana abalinganiswa ungabalulekanga ibali elingeyonyani. Ndiyavuma, Rappers ukuva ukuthetha "zinomtsalane” amantombazana kwikwayara yecawa kwenza ndoyika, kodwa akukho nto kukrakra kunene kum ngaphezu intlekisa uYesu ngokwakhe.
Rappers abaninzi bazibize uThixo, babeka phezu kwinqanaba noYesu, kwaye vulela wathabatha igama leNkosi ndabulaleka. Ndiye ke wakha albums liphela imixholo zonqulo yokungahloneli. Ndiye Basebenzisa ubuchule lawo alinikwe nguThixo ukuze ize kuphoxisa uMdali wabo. Hayi ehlekisayo.
Njengoko umlandeli kaYesu, Mna bekhubeka ngokobuqu koko ndiva, kodwa ngaphezu koko Ndiyoyika kuba abo ba ubuyingxonde kum la amazwi okunyelisa. Sonke koyikiswa indoda ndiphulukene bamtshicela ebusweni uMongameli, kodwa kufuneka wamoyika ngakumbi kuba indoda wamtshicela ebusweni kaThixo uSomandla.
Ngoko Ndimele ndithini njani? Ndikwazi kuqalisa iphulo ukusebenzisana umculo wabo. okanye, njenge rapper ngokwam, Ndikwazi ukubhala irekhodi diss sivakalise kuse emaphakadeni. Ndiya kunindulula nina isigqibo sokuba nokuba ezo ndlela ilungile okanye ingalunganga. kodwa enyanisweni, Andiqondi ukuba benze kakhulu ukusombulula le ngxaki.
Umculo ezi Rappers ndinikhululele utyhila iintliziyo zabo. amazwi zethu zisoloko umfanekiso ogqibeleleyo kwenzekantoni ngaphakathi kwethu. Ngaba wakha Ukhubeka ephethe iglasi yamanzi okanye incindi? Nantoni na kwiglasi iphalale kwi emhlabeni. Njengoko sonke sisazi, ubuxelegu yethu ayisebenzi ulwelo, nje ibonisa ukuba yintoni kwiglasi. Kuyinto enye ngamazwi ethu. Xa sithetha, okanye rap, okuqulethwe iintliziyo zethu gabhu ngaphandle. Intetho umculo akusenzi sibe sisono, kodwa esichengeni yintoni iintliziyo zethu kunye neengqondo (Mateyu 12:34).
Ngenxa yaloo, ukuphulaphula abanye Rappers abenza imixholo zonqulo uxela izinto ezimbini kum.
Ekuqaleni, baqonde ntoni na uYesu. Ukuba wenza, abakwazi ukuthetha naye ngale ndlela. Kanjalo, bazi uYesu indoda engumYuda obebethelelwe emnqamlezweni kwiminyaka engamawaka amabini eyadlulayo. kodwa, ke musa ngokwenene ukuqonda ukuba.
Akukho mntu okanye umfazi engqondweni yabo yasekunene bangazama ukuba bona kwinqanaba kunye uMlawuli elililo ukuba baqonda ngokwenyaniso kuye ukuba abe. Akukho mntu uza nantlonelo Yena ngokunxulumana kuye izenzo ngesini okanye nobundlobongela xa ndakuqonda ukuba uMgwebi obungunaphakade imiphefumlo yabo. Bangavumanga aphosa igama lakhe ngeenxa ngathi Yena Wayengengomntu nokunyanga igama lakhe kunye noburharha kunye nantlonelo.
Xa uye ngokwenene ukubona uYesu, uqonde ukuba Yena nanto. Xa umazi ngokwenene uKumkani, uthobela igunya lakhe, nina musani umngeni kuyo. Ngoko isigqibo nda uzobe kukuba Andikuboni ngokuba ngubani Yena.
Isibini, sifuna abantu abamaziyo uYesu ukuthetha. Hayi nje iingoma kunye nezithuba blog, kodwa ke xa sisitya, kwi gumbi, kunye eklasini. Ngoba? Ngenxa ngoko okungazi kwaye hloniphi ayikho ukuba Rappers. zobugcisa ngokungakhathali na ibinzana nje omnye kuyo. Siphila inkcubeko mekisa inyaniso (2 Korinte 4:4).
Ukuvula Amehlo Blind
Ngoko ke, ukuba uyazi ukuba uYesu, ukuxelela abahlobo bakho kunye nosapho inyaniso. UThixo ukuba baqalisa. Nguye ukunqulwa, wayemthanda, wawuthobela, yaye. Yena ngenene. Uyithiyile isono, wamthuma uNyana wakhe ukuba kude kuyo. Inyaniso, UNyana wakhe wafa waza wathabatha isohlwayo sesono ngoko ke akuyi kuba yimfuneko ukuba. Ke uThixo wamvusa kwelabafileyo, ukuze sibe nako ukuphila ngonaphakade naye.
Kwathi oku iindaba ezilungileyo kwabanye! kodwa nceda, ukwenza njalo kumnandi. Yeka ngxolela abantu, kwaye uqale babathandayo. Ukuba sibonile uYesu enguye, oko akuyi kuba wena ngaphezu nabani. Kungenxa yokuba uThixo wawavula amehlo akho oyimfama. Thandaza Wayeza kwenza okufanayo abahlobo bakho kunye nosapho.
Ukuba awuyazi uYesu, kumele ukuba bamazi. Yena wawuthandeka kulungile, kwaye ngaphezu simele simnqule. Kukho akukho namnye kuthi ukuba awunako ukungazinanzi uThixo okanye ukunyanga uNyana wakhe nje nomnye dude. ngonaphakade lwethu kuxhomekeke into esiyikholelwayo ngoYesu. Yaye inyaniso, nokuba thina bakholwayo kuye okanye, siya kugwetywa nguye.
Ngoko ke yintoni nguThixo nonbeliever ubuza? uMdali, noMlondolozi, kunye noJaji. Ukuba siza wojika nikholwe - noMsindisi.
*isikhanyeli: Mna andikanyuki, ecebisa ukuba umamele iingoma ekhankanywe ngentla. Omnye wabo iqulethe nokumthuka ukuba akayi kufaneleka okanye luncedo abaninzi.
Abe • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:55 mna • impendulo
“Sonke koyikiswa indoda ndiphulukene bamtshicela ebusweni
umongameli, kodwa kufuneka wamoyika ngakumbi kuba indoda wamtshicela ebusweni uThixo uSomandla.” – Ukuba isivakalisi enamandla kakhulu!
Enkosi eli nqaku Uhambo! Ndikuxabisa ngokwenene Hip Hop ongumKristu kuba ndisoloko ndicinga ukuba lyrically ngayo umxholo phi nokufundisa ngaphezu CCM indumiso umculo eqhelekileyo.
Okuphoxayo, Mna Bendingamginyi wempangelo Hip Hop ngenxa rhoqo eliphindaphindayo iiklopsi ngesondo, iziyobisi, self oziphakamisayo, etc. Oku kuye kwanjalo kwangaphambi ndaba ngumKristu.
Inyaniso, Ndakhula ukuphulaphula punk rock kwakusoloko yesitshixo. Xa ndafumana Hip Hop ngumKristu, ndiyayithanda! abahlobo bam izinto ezothusayo ukuba ulibekele Hip Hop ukususela owayesoloko sazeke kuyo, ubuncinane wempangelo Hip Hop.
Qhubeka usenza umsebenzi wakho mkhulu kunye nam ndiya umzalwana wam! Kuba Uzuko bukaThixo wethu, uMsindisi wethu othandekayo uYesu! :D
Avery • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:56 mna • impendulo
CherishJesusLuv • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 5:47 mna • impendulo
Ndiyavuma ukuba ngokuphuphuma kwentliziyo umlomo uthetha, ngoko ngokungathandabuziyo amazwi eengoma iza kuba malunga whats behamba ngayo umntu.
Nam ndingathanda ukongeza ukuba iimvumi ezininzi Country ukuthetha kwakunye ngoYesu njengokuba omnye baya kusela kunye? Ummm yeah kunene ukuba bambona baza kuba abathobekileyo kwaye wayengayi kucinga okuninzi ukusela. Okanye ezama ukuzifihla ebusweni bakhe.
Ndingathanda ukwabelana apha kunye nani, ukuba mna andibizwanga ukuba bathethe nabantu ngothando Lwakhe. UMoya wakhe wandixelela ukuba athethe yandishiya kubantu. Andiyi Ndimhle ndaza zama ukuhlala engenabala kulo ihlabathi, yaye ukukhula ngathi namanye amaKristu.
Ndandifuna ukwabelana nani inxenye ubungqina bam ukulunga kaThixo ebomini bam.
Ndandisoloko ndicinga ngathi ndawuva ukubukela uThixo kum njengoko ulutsha. Ndiya kuvuma kuYe ulahlekile ngemini ecinga ngothando lwakhe. Xa ndandi 15 iNkosi ngokoqobo kumpha ngothando lwakhe uMoya kwaye ndafumana uMoya oyiNgcwele ngaloo mini. Umlomo wam eyasetyenziswa uMoya ukuphendula imibuzo ukuba abanye e iintliziyo egumbini. Kwaye Wathetha nam wayigalela intliziyo yam endixelela Wayeze ukuhlala kwam yaye andikhusele aze athethe wandiphosa xa ixesha elifanelekileyo. Ndikhumbula xa ndandineminyaka kwibanga 9 yaye aba bantu trash iitoti ezipheleleyo iikhondom esikolweni sethu. Robert E. Lee Tyler Tx. Basibonisa imifanekiso emininzi kunye deceases ukuba ngesondo wayeza kuzisa. Basixelela ukuba azalise ukhululekile ukuba azalise iingxowa ezincinane trash brown iikhondom kwaye uthabathe kubo xa abalufunayo. Baye nabo bezichankcisa ukuba nathi aye kwi-ofisi abongikazi kwaye ufumane ezinye ukuba wayengafuni ukuba ubasuse ngoko. Xa bathi,”Isondo ukuzaliswa ilungileyo ukuba ukhe kuwuzalisa.” Ndaphakama kwi-phambi yonke kwiklasi yeBakala 9 yaye aba bantu, bekuxela. “NguMoya oyiNgcwele Akukho kaThixo yeyona nto ingcono kuni, kwaye ndakhe ndiyizalise.” Kwakufuneka amapolisa bayandiphuthuma kwi-ofisi de emva kokuba begqibile omkulu kukho. Ndikhumbula abafundi abambalwa wema kunye nam, yathi tye. Oku ekuqaleni uhambo lwam.
Kamva Ebomini andisafuni igumbi apho ukusela nemidlalo ikhadi. Ndaziva ngathi kwakufuneka ukuba asabe ngale ndawo le imvakalelo entliziyweni yam phakathi kwam ndikhumbula. Ndabona indoda kumatshini karaoke baqala ukuthi igama lam, wathetha izinto ngam ukuba bendingazi ukuba no kulwazi. Mna Bamlalela waza waphawula ndandibona iimpondo ephuma intloko yakhe Ndabuza umhlobo wam ukuba akwazi ukubona ukuba kwenzeka ntoni na, wathi yena hayi, kodwa ukuba madolw ngathi kukho. Ndandisazi ubona into ngokomoya ngoko eyenzekayo. Ndabona izinto ezininzi njengencakuba amazinyo ezibukhali kwaye neenzipho, yaye ngelo xesha waya emnyango ukuba uphume. Le ndoda kwimatshini karaoke wamemeza ukuba abafazi ukuba avale ucango kum kwaye ke makushiyeke, waba nako yaye wakhawuleza waya emnyango waza wema-phambi komnyango lokuvala kum ngaphakathi. Ndothuka ngokupheleleyo oko kwenzekayo emva koko. Ndabona idemon ugliest kangangoko ukuza nesiqingatha kule ndoda ngokungathi kudla nam apho, yaye ngelo xesha isigubungelo entle emhlophe wehla phezu umzimba wam wonke yaye ngephanyazo idemon moya kulo mzimba abantu. Le ndoda ababa nakuma, inkwiniza ucango ibe isikhundla ehleli Ndabona iinyembezi ahla ubuso bakhe. Mna ngoko nako ukuvula ucango na nale ndoda ihleli kwi-phambi ilula nje Ukuba ebengenguye behleli apho, waza ke wabaleka ngokukhawuleza eludaka mna kulo entsonkothileyo Iapatmenti.
Mna kule ngongoma kwakungathi kwakufuneka ndikhwele ukuzeyisa wam ebantwini bonke ebomini bam ukuba nokukucinga wakundifaka kwigumbi nabantu ababenaye yidemon. Kwaye ngoko ndalwa indlela yam kude emigewu kunye neempembelelo ezimbi. Andizange ngokwenene ubomi bam bonke kuThixo ngeli xesha kwaye ndinqwenela ukongeza mna nangoku uqeqesho kule ndawo kwakhona. Kodwa uThixo ukukhusela kum ngale ndlela nakuba ulutsha kunye abadinga inceba nobabalo kangaka, nangoku ukudideka ingqondo bam unanamhla. Uthando lwakhe iyamangalisa. Mna nazo kuphela umoya mnye wedemon apho ndandibona ngokomoya. Mna sisebenza hwy 155 kwaye ndaqaphela ipleyiti imoto wathi “Vampire” kuyo, ndithe imoto Ndazibona umqhubi waza wabona idemon kanye apho umzimba abantu. Ndiya kukukhawulezisa yokuqhubekeka phantsi endleleni kude lo.
Omnye umzekelo kwesiKhuseli kaThixo ebomini bam. Xa ndandiselula ixesha emva kokuba ndifumene uMoya oyiNgcwele mna wayekhwele ekupheleni esisemva kuphuthuma iilori Louisiana kwaye yayindim nabazala bobathathu mncinane kakhulu ngasemva nabazala ezintathu phambi. Mna ndive uMoya undenze ukucula Uye lonke ihlabathi ezandleni zakhe, Ndaza ndema waza waphakamisa izandla zam kuThixo. Ngelo xesha njengoko nabaza bam ngasemva Sijonge kum nje ukuba kutheni na ukuba ukucula ukuba, umza wam awayezibhokoxa edlula ilori ukuba ilungelo lethu yaye thina usafunda kwaye ilori waba leyini phambili ezayo ngqo kwi. umza wam lowo uqhuba athi, “Ndenze into endiyithandayo uThixo.” kunye nezinye umza wam phambi wathi, “Thixo wam.” kwaye mna ephakamisa izandla zam kuThixo yaye ecula. Ndibone entle imvula-waqubuda isandla isileshi ilifu kuhla ngephanyazo kwaye susa ilori ukuba ukuba intloko phezu zingqubane nathi. Ndiyakhumbula ndibona elorini ngasemva kwethu ndisihla endleleni ngokungathi akwenzekanga nto. Sathi sakufika ukuba umakazi wam ekhaya nabaza bam bathi, “Sonke wayeza kufa ukuba kwafuneka Lixabise belilele lori.” bambuza into endiyenzayo phaya ndathi fenesi ukucula yaba lonke ihlabathi ezandleni zakhe. nabazala bam nangoku Awe kaThixo ukhuseleko wakhe sonke loo mini. Ndabaxelela ukuba akufanelekanga “mna” kodwa “uThixo” lowo wa si khusela.
Oku nje ezimbalwa amaxesha amaninzi uThixo kuye kwandikhusela, wabonisa inceba kum yaye endinika ekwenzakaleni.
Ngako konke awakuthethayo Ndiyathemba oku ikhuthaza umntu ngaphandle phaya, Enothando uYesu akukho nje malunga “ebona” into yenzeke kuba siyazi iSibhalo uthi Hayi, uyolo lomntu ungakubonanga ukanti nangoku ukholelwa. Kwaye ukuba yinxalenye kuphela ye sibhalo FYI. Anyways Ndandifuna ukwabelana le nto ndithi kuthanda UYesu, Ndikholelwa Uyasingqinela asikhusele,inceba, Nothando. Ndifuna wonke umntu ukwazi uKumkani wethu uba netheko lomtshato yena ulungiselela intanda yakhe. Thina iCawa yakhe intanda yakhe, yena ufuna mna yaye nabani ukufunda eli yokuzilungiselela kwanangokubonakala kwakhe, kwaye ukuba baguquke ezonweni apho simlandele. Ndiyamthanda Uhambo wakho umculo. Kuye wabasikelela ubomi bam nabanye ngeenxa zonke kum. Ndiyathandaza ukuba uya kuqhubeka Beka Mat 6:33 abalufumeneyo, baphile ubomi waqononondisa Kings bethu ukulunga. Ndinombulelo kuba ibetha oluhle amazwi uThixo onothando mna nosapho lwam abaselula esizifumanayo njengoko bamnyamekele. Lixabise :) Ndinguye UNASHAMED!
Mateyu 6:33 Funani ke tanci ubukumkani bukaThixo, nobulungisa bakhe; zaye zonke ezo zinto ziya kongezelelwa kuni.
MIMSHACH CO • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:57 mna • impendulo
Thetha ngale rapper . Yena waba “uYesu uhamba” umbono kushishino Hip-hop njengoko unayo kodwa kwenzeka ntoni? “ayiphumelelanga” ukuba kunjalo, ukuba ndithethe. Yintoni ephosakeleyo?…Le mibuzo kufuneka ufumane iimpendulo.
Ehleli emva nokuhlalutya Yintoni eyenzekayo kuYesu “umfanekiso” Ndiqhelile nditshintshe nto. Njengento yokuba nakho ukuguqula uYesu’ UYESU!!.
Abebethelelwe ngabanye neqela lamajoni amaRoma Kutshiphu kwaye ukuba kwakhokelela ukungqina ukuba uYesu unguThixo emva kokuba kuvuswa.
Hamba uye usebenziswano irekhodi evela YMCMB kwaye Shumayelani Inyaniso ngendlela ekrwada, uze ubone enoba uya kusinda njenge rapper.”bathi ihlabathi ukuba ufuna ukuva” ishishini…SMH
ngoko ke sebenzisa kwihlabathi kwaye iinkqubo: Ukufumana imali, ehenyuzayo, njalo. yokwandiswa ukuba nokuba uYesu wazibonakalalisa ngokwasemzimbeni kubo namhlanje, ngaziva, baya akahexa abuyele kwiindlela kukho endala kamva.
“Unga lula ukutshabalalisa umthi kuyo wancancisa nqanaba kodwa hayi xa sele imiselwe ngokupheleleyo njengoko Timber.” nendlela kuphela ukuphelisa Timber ngokupheleleyo kukuthi ngokuyitshabalalisa ingcambu.
Ngoko ke ukwenza oko uya kukwenza ukuze atshabalalise kwingcambu ingxaki njenge “kusindiswa” ukuba. Xelela ihlabathi oko akuyi ndabeva ngaphambili.. Ubungqina izinto uYesu’ ubukho, Enamandla nobuqaqawuli “ukukhanya okutsha”
Nicholas J. Gausling • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:58 mna • impendulo
Abanye abahlobo bam kutshanje bavakalisa ukuba ndlela ukubona ngobuxoki ngokufunda ukuqaphela inyaniso; Ndicinga ukuba ubulumko usebenza apha. Ubani Ndihamba njani ukwenza iphulo kulo umculo yentshembenxa, kodwa kungcono kukuba ukugcina ukuvelisa umculo-lugxile kuThixo.
Mna okuninzi ifeni rap ngokwam, kodwa mna enkulu nombulelo ukuba kukho abantu ezifana ngokwakho abo bakhonza njenge uhlobo wevangeli lwemveli kwaye rizevu ukuba inkcubeko kunye uthando lukaKristu.
Avery • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:58 mna • impendulo
eyoyikekayo, -Wacinga kakuhle ngaphandle perspecitve ukusuka Trip Lee!
Kathy • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:59 mna • impendulo
Intle luze wathi! Enkosi ekuvakaliseni inyaniso!
MIMSHACH CO • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:59 mna • impendulo
Kulungile. lixesha lokuba “Rappers christian” ukungcikiva kwabo (ihlabathi) uThixo(satana). njengoko kulula nje.
Ukuba ucinga ukuba uYesu wethu wenziwa engamhlonelanga / wadlala ke Rappers zibe bhetele ukuba Abandibuyekeza uSathana wabo abanamandla ngokuthi kusisithuko / nokungahloneli uSathana ngendlela nzima kabini.
Dr. sisithabathaba Utley • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:00 mna • impendulo
Kwincwadi yam Rap and Religion: Ukuqonda Gangstas uThixo, Ndiyanibhalela indlela Rappers bona ngokwabo njengoko uYesu kuba ngokumthi ngathi ba. Phuma. http://rapandreligion.com
lilly • EyeDwarha 31, 2013 ngexesha 8:38 pm • impendulo
Ewe! Enkosi lokwabelana Dr. Utley! Ndeva othetha eNorth Park University kuwa yokugqibela yaye nefuthe lolu xhulumaniso.
Terence Abraham • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:00 mna • impendulo
Wow Ngaba…..Ndiya sikuxabisa ukuba kusetyenziswa indlela enamandla kwaye lwabaNtsundu amagama ukubeka ngokusebenzisa iingcinga zakho [ibonisa ntono kwiglasi yakho :) ]…Ndandifuna ukuba luvakalise izimvo ezifanayo, Ufuna ngokwenene wazisa kwengcaciso kule ngesihloko usebenzisa imizekelo emihle.
MoNsTroSity • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:00 mna • impendulo
kukho oothixo abaninzi, neenkosi ezininzi. (1Co8:5) aHaYah asher aHaYAH, Wotsho koonyana YISRAEL uNdinguye undithumile kuni. (Ex.3:14) & koko ke El of Avraham, Yitschak, n Yaacov (Ex.3:15).. YmmanuwEL, ISAYA HaMashiyach.
THANDAZA & funda iBhayibhile yakho kakhulu yaye Lowo Ungcwele YisraEl WIL ibonisa iimpendulo evela kuBawo yethu ART ezulwini… Usindiso Msindisi comin umva ngenxa ppl yakhe… “Elinambini Izizwe YisraEL” & abo bakholwayo ilizwi aHaYAH.. ukufuna Iphepha – Usindiso njenge nobutyebi obufihlwe… Mbonge aHaYAH – Lowo, Lowo, & Lowo uzayo. (Rev1:4) nokuba kuza njalo, ISAYA. Amen.
RJSALEZ • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:01 mna • impendulo
Ngoko ke yintoni nguThixo nonbeliever ubuza? Ndithi ubacele umva, Yintoni a non ikholwa kuThixo? ;)
uKumkanikazi • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 10:02 mna • impendulo
lo ngokwenene umyalezo mkhulu
iyandinceda ukubhala into namhlanje, musa ukuvumela abanye abantu okanye ezingatshongo sway ukuba uthetha inyaniso. Ndiyazi ukuba kukho abathile phandle ukuze bazame ukufumana okukruqula-. Ndim apha kuthi Gcina phezulu ukuba ukwenza umahluko
MsB • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 9:54 pm • impendulo
Xa ukuba ihlabathi, Ndisuke hop hip enzima ongxolayo ngenxa bugcisa kwaye ikakhulu ngenxa umxholo. Abaphulaphuli eziphumela amazwi ezinomtsalane intliziyo. Ngoko ke, kwimeko, iintliziyo okoko nje kukho engekabuyi, khona apho kuya kubakho abo eziphumela kumyalezo. Eli nqaku okunceda isaziso kuthi, thina bakholwayo, kuba “zenziwa thina ukukhanyisa phezulu isixeko entabeni” kwaye sifuna ukuba abantu 'naso xa beziva elahlekileyo’ SO ukuba Ungaya kubo izishumi umsindisi. Kokuba echazwe umsebenzi wethu kuphela kweli nqaku- thanx! P.S. Ndiyamthanda INDEBE njengo mkhangeli!!!! KUHLE. inkosi ikusikelele
Khankanya: Rebel Rapper Trip Lee Talks Malunga Rap & inkolo - EWE FM
UnveilDa1 • EyeThupha 20, 2013 ngexesha 1:32 pm • impendulo
Ndiyayithanda inkqubo ingcingane uMnu. Lee, Ndiye ibe ngumlandeli Uhambo ukusuka jump, Xa wabuza umbuzo “Ngoko Ndimele ndithini njani? Ndikwazi kuqalisa iphulo ukusebenzisana umculo wabo. okanye, njenge rapper ngokwam, Ndikwazi ukubhala irekhodi diss sivakalise kuse emaphakadeni. Ndiya kunindulula nina isigqibo sokuba nokuba ezo ndlela ilungile okanye ingalunganga.” Ndicinga impendulo kunye irekhodi diss sisulungekile kakhulu, Ndibona oku njengethuba ukwenza kanye oko wakwenzayo yati uDavide. Yena waba ithuba bavalwe imilomo Lowo wayethetha uThixo wakhe. Ngoku impembelelo kunye emangalisayo uYehova unika italente Uhambo unalo, Ndibona oku thuba liyimbunguzulu ukungena noShishino.
sasha • EyeThupha 21, 2013 ngexesha 4:15 pm • impendulo
Ngamana uThixo angakusikelela- Blog Good!
keron • EyeThupha 27, 2013 ngexesha 3:34 pm • impendulo
UHAMBO ENKULU yadumisa uThixo!!!!!!